Izakhono ezi-5 zeTekhnoloji kubarhwebi beDijithali yangomso kufuneka bafumane kakuhle namhlanje | Martech Zone
NgoMgqibelo, Oktobha 31, 2020 NgoMgqibelo, Oktobha 31, 2020 ULarizza de Vera
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, kubekho utshintsho olukhulu kwindlela esisebenzisa ngayo i-intanethi kwintengiso yedijithali. Saqala ekudaleni nje iwebhusayithi ukuza kuthi ga ngoku ukusebenzisa idatha kunye nomsebenzi womsebenzisi. Ngokhuphiswano olukhulu kwindawo yedijithali, ukuba newebhusayithi ayizukuyinqanda ngokulula. Abathengisi bedijithali Kuya kufuneka benyuse umdlalo wabo ukuze babonakale kwindawo eguqukayo yanamhlanje.
Ukuthengisa kwihlabathi ledijithali kwahluke kakhulu kwintengiso yesiko esiyiqhelileyo. Ukuyila sisisakhono esibalulekileyo; Nangona kunjalo, oko akuqinisekisi impumelelo yakho. Kukho izixhobo ezininzi, izakhono, kunye nokusetyenziswa ekufuneka ukwazi ukuze ube ngumthengisi ophumeleleyo kwidijithali namhlanje.
Unoko engqondweni, sidwelise izakhono ezintlanu ekufuneka zikuncede utsibe indawo yakho ikhondo kwintengiso yedijithali.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando
Iinjini zokukhangela ezinje ngeGoogle kunye neYahoo zinceda ukuqhuba ukugcwala ngakumbi kwiwebhusayithi yakho kwaye ivumela abathengi abanokubakho bakufumane ngokulula. Ngokuba nesiseko esiqinileyo sendlela seo iyasebenza, unokwenza iphulo lokuthengisa elicwangcisiweyo elinokuphucula ukubonakala kwewebhusayithi yakho kwiinjini zokukhangela.
I-SEO inokuchaphazela nokuziphatha komsebenzisi. Umzekelo, abasebenzisi kunokwenzeka ukuba bacofe iwebhusayithi ezifumaneka kwiphepha lokuqala leziphumo zophando. Okuphakamileyo kwiziphumo zokukhangela, kokukhona ukuboniswa kwakho kubathengi abanokubakho.
Ke ukukunceda uqonde iziseko ze-SEO, ungakufunda oku Isikhokelo sokuQala ithunyelwe nguGoogle. Isingeniso esihle kwi-SEO.
Enye yeendlela ezilungileyo zokulandela kunye nokuvavanya inkqubela phambili yakho yentengiso kukudatha kubahlalutyi. Kule mihla, unokuhlalutya umsebenzi wabathengi kunye nezinto abazifunayo okanye indlela abavakalelwa ngayo ngemveliso ethile. Ngenxa yoko, amaphulo okuthengisa kunye nezicwangciso zichaphazeleke kakhulu kukuhlaziywa kwedatha.
Uhlalutyo lwedatha lwenze ukuba kube lula ukulandelela uhambo lomthengi, ukusukela oko bacofa kwiwebhusayithi ukuya ekugqibeleni bathenge into kwiwebhusayithi efanayo. Ngaloo nto, ukwazi ukusebenzisa izixhobo zokuhlaziya idatha (umz. IGoogle Analytics, iAdobe Analytics, Hubspot, njalo njalo) iye yaba yinto eyimfuneko kuyo yonke intengiso yedijithali kule mihla.
Uphuhliso lwe-UX kunye ne-UI
Amava omsebenzisi (UX) kunye Indawo yomsebenzisi (UI) inegalelo kakhulu ekugcineni abathengi.
Uphuhliso lwe-UX ngamava abasebenzisi kunye nendlela abanxibelelana ngayo newebhusayithi / usetyenziso; ngelixa i-UI luvavanyo ngokubanzi lwewebhusayithi / usetyenziso, into ebonakalayo kunye nolwakhiwo.
Ngokudibeneyo, bayabamba kwaye bagcine ingqalelo yabasebenzisi kwiwebhusayithi okanye usetyenziso. Iinkampani ze-E-commerce ezinje ngeAmazon zityala imali eninzi kuphuhliso lwe-UI kunye neUX ukukhulisa amaqondo okuguqula kunye nokunyusa ukuthengisa kwi-Intanethi. Akumangalisi ukuba kutheni kukho isidingo esonyukayo sabaqulunqi be-UX kunye ne-UI.
Ulwimi olusisiseko lokufaka iikhowudi
Inkqubo yenye yezona zakhono zibalaseleyo zokuncedisa kwintengiso nganye yedijithali. Ngaphandle kokungabinabo obo buchwephesha okanye ngaphezulu kobunzulu bokufaka iikhowudi, ukwazi iziseko kuya kukunceda ekuhambeni kwexesha.
Xa uqonda iziseko zenkqubo, unokuba nentsebenziswano esebenzayo kunye neqela lophuhliso. Ungazifezekisa ngokulula iinjongo zakho zokuthengisa kuba uyakwazi ukunxibelelana ngokucacileyo nabo. Ngaphandle kwalonto, uya kuba nakho ukukhomba kwaye wenze iingcebiso eziluncedo kwiqela lophuhliso ngokunjalo.
Ukwenza iikhowudi kukufunda nokubhala okutsha okubalulekileyo. Nokuba ungakanani ubudala okanye ishishini ukulo, akukaze kusekuqaleni kakhulu okanye kubemva kakhulu ukuba ungayifunda. Izakhono zakho zokufaka iikhowudi ziya kuhlala ziluncedo, ngakumbi kuba amashishini amaninzi ayahamba kwi-Intanethi.
UDavid Dodge, uMyili weMidlalo, uColumnist, uTitshala, kunye ne-CEO ye Codakid
Inkqubo yolawulo lomxholo
Ulawulo lokuqukethwe kubaluleke kakhulu kwihlabathi ledijithali. Unikezwe ukuba ngaphezulu kwesiqingatha sazo zonke iiwebhusayithi zisebenzisa iCMS, Akumangalisi ukuba kutheni sisixhobo esifanelekileyo kuyo yonke intengiso yedijithali.
I-CMS inceda abathengisi basebenze ngokufanelekileyo, ukusuka ekuhlaziyeni rhoqo iwebhusayithi ukuya kulayisho umxholo omtsha. Ihambisa ukuhamba komsebenzi kwaye ivumela abathengisi bedijithali ukuba bavelise kwaye bafezekise ngakumbi ngexesha elincinci. Kuba umxholo ikakhulu unegalelo kwizinga le-SEO, uninzi lwamashishini ludibanisa i-CMS kwiwebhusayithi yazo.
Ukuza kuthi ga ngoku, ukwazana namaqonga e-CMS ahlukeneyo (umz WordPress, I-CMS Hub, iSquarespace, njalo njalo) iya kuba luncedo. Ngaphandle kwalonto, unokusebenzisa la maqonga ukwenza ipotifoliyo yakho yokuthengisa kunye nokubonisa ukuqhelana kwakho neCMS kubaqeshi abanokubakho.
tags: umsebenzi wentengiso yedijithaliumsebenzi wokuthengisaimisebenzi yokuthengisainkquboSEOIzakhono zobugcisaizakhono zobugcisauxWordPress
ULarizza ngumbhali ozimeleyo ohlala kwiiPhilippines. Ubhale amanqaku aliqela kwiphephandaba laseAsia, kwaye kutshanje usebenze nomthetho wepropathi ye-Intellectual Property e-Singapore kwaye uceba ukulandela ikhondo lomsebenzi we-IP kwezomthetho.